Bit By Bit - Ubunzima intsebenziswano - 5.5.2 mpe ukungafani
Xa sele siqhutywa kakhulu abantu ukuba basebenze yingxaki yenzululwazi, uya kufumanisa ukuba nxaxheba yakho iya kuba ngeentlobo ngeendlela ezimbini eziphambili: ziya kwahluka ubuchule babo baya ziyahluka inqanaba labo umgudu. Abasabela lokuqala abaphandi abaninzi kwezentlalo ngaphandle nxaxheba libya ze uzame ukuqokelela isixa esiqingqiweyo ulwazi ukusuka ekhohlo wonke. Le yindlela ephosakeleyo yila iprojekthi ubunzima intsebenziswano.
Okokuqala, akukho sizathu ngaphandle nxaxheba abanezakhono ezisezantsi. Imbiza evulekileyo, abathathi abanezakhono libya zibangela akukho ngxaki; iminikelo yabo ayonakalisa nabani kwaye musa kufuna naliphi na ixesha ukuhlola. Xa kubalwa lwabantu kunye neeprojekthi nokuqokelelwa kwedatha zisasazwe, kwelinye icala, ukuba luhlobo luni ulawulo olusemgangathweni iza angafuneki nganto, kungekhona eliphezulu bar inxaxheba. Enyanisweni, kunokuba ngaphandle nxaxheba zakhono, indlela engcono kukwenza ukubanceda benze igalelo ngcono, kakhulu njengoko abaphandi eBird uyenzileyo.
Okwesibini, akukho sizathu ukuqokelela isixa esiqingqiweyo se ulwazi nxaxheba ngamnye. Inxaxheba kwiiprojekthi ezininzi ngentsebenziswano yelifu kakhulu ukungalingani (Sauermann and Franzoni 2015) kunye nenani elincinane labantu negalelo kakhulu-maxa wambi ebizwa intloko namanqatha -yaye kakhulu abantu negalelo kancinane-maxa wambi ebizwa ngokuba ngumsila elide. Ukuba awunalo ukuqokelela ingcaciso intloko inqatha nomsila elide, bamkayo iitoni ulwazi THATHWANGA. Umzekelo, ukuba Wikipedia wamkela-10 ne-10 kuphela edits umhleli nganye, bekuya kuphulukana malunga nama-95% ye edits (Salganik and Levy 2015) . Ngoko, iiprojekthi intsebenziswano ubunzima, kungcono ukuba kunyuswe ukungafani kunokuba uzame ukuze ipheliswe.